Yakanakisa Bi Folding System Mugadziri uye Fekitori | Medo
Kureba Kwekupedzisira Kupfuura 6M
Patent Yakavanzwa Sash Yakavanzwa Chimiro
Hapana Gap Pakati Pakati Paviri Sashes Neakanaka Kutarisa
Otomatiki Kukiya Sisitimu Yekushandisa Mashoma
MDZDM100 Yakavanzika bhandi bi kupeta musuwo system
Iyo bi inopeta musuwo system iyo inosanganisa kupisa kwemhepo, yakamanikana furemu, yakavanzwa bhandi, uye yakakwira-yakaderera mvura chiratidzo track ndeye MEDO MDZDM100, yekutanga fenicha yakavanzwa sash bi kupeta musuwo munyika! MEDOdesigner inozivisa nekudada: Iwe unoibvunza iyo. Tinogona kuzviita
Otomatiki kukiya system, zvekupokana mubatanidzwa
Otomatiki kukiya system: imwe yekudhinda uye imwe push yekuvhura, imwe kudhonza kukiya. Yekupokana kurongedza: kwakasiyana kusanganisa kwenzvimbo inoshanduka uye inoshanduka.
Anti-pini dhizaini: chenjera uye nehanya chengetedzo. Kona inotsvedza isina mbiru ine dhizaini yakavanzwa.
MEDO Bi-Folding Doors ndiwo akakwana kuenderana kune chero nzvimbo, inoshandura nzvimbo dzekugara munzvimbo dzakajeka uye dzakavhurika nekupeta nekuunganidza mapaneru kune rimwe divi. Nekona Bi-Kupeta Sisitimu, iwo wese madziro anogona kunyangarika kupa 360 ° maonero.
Yakavanzika Sash | Yakatetepa Furemu
Kana maneja wechigadzirwa paakaedza kuviga bhandi repadhoo, vanhu vakafunga kuti anopenga: Izvi zvingaitwe sei?
Kana vagadziri veMEDO vakasanganisa kupisa kwemhepo, furemu yakatetepa, bhandi rakavanzwa uye yakadzika-yakadzika nzira isina mvura kupinda mune imwechete yekupeta musuwo system
Vanodada kuzivisa: chero chaunoda, isu tinogona kuzviziva!
Iine Polyamide thermal barrier tekinoroji, MEDO Bi-Fold Series inobatsira kuchengetedza makamuri kudziya munguva yechando uye kutonhorera muzhizha, zvichidaro kudzikisa magetsi zvikwereti. Uye zvakare, nzira dzinoverengeka dzechikumbaridzo dzinowanikwawo kuti dziwedzere kuwedzera-kugadzirisa mamiriro ekunze.
Yakakwira-chengetedzo mapoinzi-poindi ekuvharira nzira akaiswa pane ekuvhura mabhanhire, ane kupfura-bhaudhi inokiya uye mukati me glazed yakavharwa zvikamu zvekuwedzera vimbiso.
ASI BIG MAONERO
Iye muridzi ane rudo rwakadzama rwekamuri hombe uye anotarisira kuve neamoindace uye nekunyaradza kukuru. Kunyangwe saiti yacho isina kunyanya kukura, iyoMD-100ZDM yakavanzwa bi kupeta musuwo system inobvumidza kuti ishandiswe seyakawedzerwa nzvimbo yemukati yekuzorora mukati megore rose, ichiita kuti mukati nekunze nzvimbo dzibatanidzwe pamwe chete munzvimbo yakakura zvisina musono.
Pashure: Casement Hwindo
Zvadaro: Curtain Wall System